जुगलमा टुकीकै भर- वागमती - कान्तिपुर समाचार
लत्रेको तारसँगै बस्तीपिच्छै खम्बा गाडिएको छ । जताततै लगिएको तार घरको बत्तीसँग नजोडिएको पनि होइन । तर, त्यहाँ कहिल्यै बिजुली आएन । ‘३ वर्ष पुग्यो, खम्बा र तार टाँगेको टाँग्यै छ, तर बिजुली बल्दै बलेन, के खान यो पोल र तार टाँगिएको हो भनेर अचम्म लाग्छ,’ जुगल ३ का तेन्जिङ लामाले आक्रोश पोखे । चुनावमा मत माग्न आएका सबै नेताले बत्ती ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि बिजुली नबालिदिएको उनले आरोप लगाए । प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:२६
भाइरस प्रकोपविरुद्ध निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका मुखमा मास्कका डाम देखिन्छन् । मास्कको डोरीले तन्‍किएर उनीहरूका काना राताराता भएका छन् ।
अनुहारबाट पसिनाका थोपा तप्पतप्प चुहिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको युद्धमैदानमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तका आँखामा आँसुको भेलले प्रस्ट्याउँछ, जिम्मेवारी सहज छैन ।
फाल्गुन ७, २०७६ लक्ष्मी लम्साल
बेइजिङ — चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानका सडकमा केही मानिस ‘मुलुकलाई संकटले घेर्न लाग्यो’ भन्दै राष्ट्रगान गाउन थाले । कोरोना भाइरस संक्रमितलाई बचाउन स्वास्थ्यकर्मी कडा मिहिनेत गरिरहेका थिए तर असफलताले निराश । ८० वर्षीय चिनियाँ श्वासप्रश्वास विशेषज्ञ चोङ नानसानका आँखा यी दृश्यले जलमग्न हुन थाले ।
चिकित्सक नै रहेका उनका विद्यार्थी वुहानमा कोरोनाका कारण खतरनाक अवस्था देखिँदै छ भनिरहेका थिए । उनीहरूमा हतास मनस्थिति प्रस्टै देखिन्थ्यो । सडकमै उत्रिएर जनताले राष्ट्रगान गाउन थालेपछि विशेषज्ञ चोङले चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग भने, ‘जनतामा ठूलो हौसला बाँकी रहेको देखें र मन भावविह्वल भयो ।’
उमेरले पाका विशेषज्ञ चोङ कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त भएको देखेर पटकपटक रोइसकेका छन् । गत डिसेम्बरको सुरुवातमै भाइरसको महामारीबारे संकेत गर्ने चिकित्सक ली वेनलियाङको मृत्युमा पनि उनी भक्कानिएका थिए । हाल चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानवजीवनमा पार्ने असर र जोगिने उपायबारे निरन्तर सुझाव पस्किरहेका चोङप्रति धेरैको आशा र भरोसा अडिएको छ । फेब्रुअरी महिनाभर कोरोनाको संक्रमण उच्चबिन्दुमा पुग्ने र तत्पश्चात क्रमशः घट्दै गएर अप्रिलसम्ममा मत्थर हुन सक्ने उनको विश्‍लेषण छ ।
उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर असर गर्छ ।’ सम्बन्धित विषयका ज्ञाता भएकाले उनका भनाइमा विश्वास राख्ने धेरै छन् । उनले चिनियाँलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अनेकन प्रश्नको उत्तर दिइरहेका छन् । उनको सुझाव र जबाफले विचलित जनमानसलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिइरहेको छ । लगभग दुई महिनाको अवधिमा श्वासप्रश्वास विशेषज्ञ चोङ मात्रै कैयौं पटक भावुक भएका छैनन्, प्रकोप नियन्त्रणमा हिम्मतको आँसु दिएर बिदाइ गर्ने अन्य चिकित्सकका आफन्त पनि उत्तिकै भावुक छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित वुहान सहरमा खटिएका चिकित्सक र नर्सका आफन्तका बिदाइका फोटा अहिले जताततै देख्न सकिन्छ । भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका साथै संक्रमितका उपचारका खट्‍न यतिबेला चीनका कैयौं प्रान्तबाट हजारौं स्वास्थ्यकर्मी वुहान पुगेका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर भिड्‍नुपर्ने भएकाले स्वयं उनीहरूकै जीवनको ग्यारेन्टी छैन । महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा आफन्तले अँगालो हालेर आँसु चुहाइरहेका दृश्य देख्दा जोकोही भावुक हुन्छ ।
कैयौं वैज्ञानिक भाइरस निदानका उपाय पत्ता लगाउन अनवरत खटिरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकिरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामीका अन्तिम भरोसा हुन् । चीनले महामारीविरुद्ध कैयौं स्वास्थ्यकर्मीलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ । पेसागत धर्म निर्वाह गर्ने विषयमा चिनियाँ नागरिकलाई सायदै कसैले छेक्न सक्छ । किनकि भावनात्मक एकता भएर मुलुकभित्रको समस्यासँग जुध्नु उनीहरूको एउटा मौलिक विशेषता हो भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ प्रगतिशील समूह वा प्रजातान्त्रिक समूह, फलानो पार्टी वा गुट भन्ने देखिँदैन। न दुर्गम र सुगमको भेदभाव नै छ।
भाइरस प्रकोपविरुद्ध निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका मुखमा मास्कका डाम देखिन्छन् । मास्कको डोरीले तन्किएर उनीहरुका काना राताराता भएका छन्। अनुहारबाट पसिनाका थोपा तप्पतप्प चुहिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको युद्धमैदानमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तका आँखामा आँसुको भेलले प्रस्ट्याउँछ, जिम्मेवारी सहज छैन । कोरोना भूमिलाई कर्मभूमि बनाउन वुहान हिँडेका स्वास्थ्यकर्मीका दायित्व बिरामीको जीवन बचाउनु हो तर उनीहरूको आफ्नै जीवन पो रहन्छ कि रहँदैन, थाहा छैन । त्यसैले, वुहानमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हिँडेका आफन्तलाई बिदाइ गर्नेले ‘अलबिदा’ को संकेत गरिरहेका छन् ।
भाइरस संक्रमित क्षेत्रमा खटिँदा स्वास्थ्यकर्मीले धेरै कुराको माया मारेका छन् । महिला नर्स र चिकित्सकले आफ्ना कपाल मुड्याएका छन् । भाइरसबाट जोगिन उनीहरूले टाउको वरिपरिका रौं काटेर सुरक्षा टोपी पहिरिएका हुन् । चिकित्सकले सुरक्षा पोसाक लगाउनैपर्छ । सबैले लगाउने पोसाक उस्तै हुने भएकाले एकले अर्कालाई चिन्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्न सुरक्षा पोसाकबाहिर मार्करले नाम लेखेका छन् । अनि साथै लेखेका छन्, ‘च्या यौ अर्थात् होस्टे हैंसे ।’
उनीहरूले डाइपर लगाएर शौचालय जाने समय बचाइरहेका छन् । आँखा, कान, नाक, मुख सबै बन्द गरेर सेवामा खटिनु पर्दा पोसाक लगाउन र उतार्ने त्यति प्रचूर समय पनि उनीहरूलाई उपलब्ध छैन ।
भाइरस संक्रमण क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी यी र यस्तै टिठलाग्दा तस्बिर इन्टरनेटमा देखिन्छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी त कुर्सीमै निदाइरहेका हुन्छन्। कडा मिहिनेत र अबिराम कामका कारण मेडिकल टिम थकानले लखतरान् देखिन्छन् । उनीहरूले घर गएर विश्राम गर्ने अवसर पाएका छैनन्, जहाँ पाइन्छ त्यहीं टाउको अड्याएर लडिरहेका दृश्यले जोकोहीको दारूण हृदय पनि पग्लिन्छ ।
अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको युद्धमा अग्रपंक्तिमा रहने सैन्यशक्ति भनेकै स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनीहरूसँग गोलाबारूद होइन, विवेक र मानवीय संवेदना प्रस्टै देखिन्छ । वुहान वुछाङ अस्पतालका निर्देशक लिउ चमिङसहित हालसम्म सात जना स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई बचाउन खोज्दाखोज्दै आफ्नो जीवन गुमाइसकेका छन् । १७ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित भइसकेका छन् । यी स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘सुपर हिरो’ नभनेर कसलाई भन्ने ? जसरी सिनेमा खेल्ने पात्रले दुःख कष्टमा सहायता गर्छ र दर्शकबाट सुपर हिरोको उपमा पाउँछ । यथार्थमा आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी अरूको जीवन बचाउने कर्ममा खटिएका चिकित्सकजस्तो ‘सुपर हिरो’ संसारमा अरू को हुन सक्छ ?
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:२२